Fanandramana ny hamono ny Donald Trump | Apg29
Fanandramana ny hamono ny Donald Trump
Trump tasters narary tampoka rehefa avy voapoizina.
Ny dokotera nahita poizina taster izay tena sarotra ny mamantatra sy manana tara soritr'aretina.
tisdag, 19 november 2019 11:23
US Filoha Donald Trump mampilaza nitsidika hopitaly izay santionany maro nalaina avy izy taorian'ny nanombohan'ny tasters haingana ny poizina.
Head Chef no filoha sain'ny mpanao
Nandritra ny fitondrana Clinton, dia voatendry amin'ny lohany Chef "filoham-tsakafo mpanao," araka ny teo aloha White House Chef Walter Scheib.
Mahaliana, Scheib nilaza fa indraindray ny fomba azo antoka indrindra hanompo sakafo ny filoha dia ny "fotsiny handeha ho any amin'ny fivarotana sy ny tsena amin'ny fotoana farany." Tsy afaka manazava ny penchant Trump ho an'ny sakafo haingana.
Fanapoizinana hafa fikasana
Ny loharanom-baovao ao amin'ny White House dia hoy izy tamin'i Alex Jones fa nisy hafa koa fanapoizinana ezaka manohitra ny filoha teo aloha.
Ara-tantara, ny fotoana naharitra ela ny fanambadiana malaza amin'ny mpamono olona, ​​noho ny fahaizany handresy ny sakafo sy ny mpanao simika hafa fitsapana natao ny sakafo hanina eo anoloany.
Ny filoha tsy naneho na ivelany famantarana ny ho marary, nefa, na izany aza, dia nisy andian-dahatsoratra ny fitsapana azy ho toy ny fepetra.
White House source: Trump nanao fitsidihana tampoka hopitaly fitsapana ho an'ny iniana fanapoizinana. Food fitiliana voalohany haingana tany amin'ny hopitaly, ary ny dokotera mino nisy ny hatsiaka ny fotoana-tara poizina
Publicerades tisdag, 19 november 2019 11:23:15 +0100 i kategorin och i ämnena: